Sikufisela inhlanhla, "isasasa elikhona" likaRosa Montero | Izincwadi Zamanje
Ngikufisela inhlanhla yinoveli yakamuva kakhulu yombhali ovelele waseSpain uRosa Montero. Ishicilelwe ngabashicileli I-Alfaguara, ngo-Agasti 27, 2020. Umbhali uzwakalise ukuxoxwa kwalo magazini IsiZenda ukuthi indaba imayelana: “… ukwesaba ukuphila, nokuthi ungakufunda kanjani ukulahlekelwa yilokho kwesaba ukuze uphile impilo ephelele, ejulile”.
Ukulandisa kusitshela ukuthi edolobheni elincane eningizimu yeSpain izimpilo zabaphikisi, uPablo noRaluca, zihlangana kanjani. Bobabili badlule ezimweni eziyinkimbinkimbi futhi amaqiniso abo ahluke ngokuphelele, kepha ngandlela thile bazosizana, ngoba bumnyama nobukhanya. Ngale ncwadi, umbhali ucabanga ngempilo, injabulo kanye nemiphumela yokulimala okwedlule.
1 Isifinyezo senhlanhla (2020)
2 Ukuhlaziywa kwenhlanhla
2.2 Izithandani eziholayo
2.3 Ezinye izinhlamvu
4 Imininingwane yomlobi
4.1 Izifundo zobungcweti
4.3 Umjaho wezincwadi
4.3.1 Amanoveli kaRosa Montero
Isifinyezo se- Ngikufisela inhlanhla (2020)
UPablo Hernando ungumakhi wezakhiwo ulayini uhamba ngesitimela engqungqutheleni ye- eningizimu yeSpain. Ejulile ngemicabango, uyasabela bona uphawu "Luyathengiswa" buqamama, ekhonjiswe efasiteleni lendlu endala ebheke emathrekhi. Ngokungazelelwe, anqume ukwehla ngenhloso yokuthi thenga kusho iflat. Ngaleso sikhathi izizathu zalesosinqumo esingalindelekile nesiphazamisayo azaziwa.
Le flethi itholakala ePozonegro, idolobha elixoshiwe elinabantu abedlula kwenkulungwane. Phambilini leli dolobha lalijabulela ukuchuma sibonga imboni yezimayini, yize kwakungekho nsalela yalezo zikhathi ezimnandi. Yize le ndawo ingafani nempilo uPablo ayeyijwayele, lapho unquma ukuphephela, ecwile ekucindezelekeni okujulile.
Kancane kancane, i-protagonist izohlangana nabalingiswa abathandekayo endaweni yayo. Ekuqaleni kubaqashi besakhiwo esinganakiwe, phakathi kwazo okuvelele umakhelwane wayo, uRaluca. Lo wesifazane oyindida uzoletha izinguquko ezingakholeki empilweni yaleyo ndoda, ezoqala ukwazisa lezo zici ebezingenandaba naye phambilini. Uzoba ukukhanya engangikudinga lapho ngibhekene nobumnyama obunjalo.
Ukuhlaziywa Ngikufisela inhlanhla
Ngikufisela inhlanhla yinoveli umlobi ayichaze njenge: “… a okuthokozisayo okukhona ngaphandle kokubulala futhi kugcwele izimfihlakalo nezimfihlakalo ”. Ihlelwe edolobheni eliqanjiwe elibizwa ngePozonegro, nesakhiwo salo sichazwa ngu- a umbalisi owazi konke, emakhasini angaphezu kwayi-300. Incwadi ihlelwe ngo- izahluko ezimfushane, lapho le ndaba igeleza khona kalula nangokucacile.
Ungumdwebi wamapulani oneminyaka engu-54, ophazamisekile ngandlela thile, ngubani ibonakala ngokugcina kwayo nangokufihlaNgenxa yalesi simo esikhethekile, ubungane bakhe bambalwa. UPablo ufinyelele esigabeni lapho ubuza izinkolelo zakho zangaphambili, izenzo, nezinqumo zakho; okungenzeka ukuthi kwamshukumisela ukuba athathe ithuba elinjalo lokuba khona kwakhe.
Kuzo umculi kusuka ePozonegro, ezikhethekile ekudwebeni izithombe zamahhashi; ungowesifazane onamandla amakhulu, ngobuntu obusha, obujabulelayo futhi ugcwele ubuntu. Yize ehola impilo ethule, umbozwe yimfihlakalo yesikhathi sakhe esididayo, asifihle kahle; mhlawumbe ngoba abaningi kuleli dolobha basesimweni esifanayo.
Izinhlamvu eziningana zesibili ziyahlangana esakhiweni, okuthi, njengabalingisi abaphambili, bakheke kahle kakhulu. Phakathi kwalezi Ozakwabo bakaPablo bagqamile, njengoRegina, uLourdes noLola, bangabokuqala ukukhathazeka ngemuva kokunyamalala kwakhe. Ngaphezu kwalokho, abangane bakhe uGerman noMatías, owazisa amaphoyisa ngemuva kokuthi engekho engqungqutheleni eyayiseMalaga.
Ngakolunye uhlangothi, kunjalo omakhelwane abasha be-protagonist, abahlala edolobheni elibonakala limile ngesikhathi futhi lapho ubuzenzisi buningi khona. Laba bantu bafihla izimfihlakalo eziningi, ezinye azibalulekile futhi mhlawumbe ziyahlekisa, kepha ezinye zimbi kakhulu futhi zimbi. Zonke zizungezwe izinkinga eziyinkimbinkimbi, ezingafani nezeqiniso lamanje.
Umbhali udale inoveli lapho kudingidwa khona izihloko ezifana nezenzo ezinhle nezimbi zabantu. Yini enye, umema ukuba bacabangisise kahle ngezimpawu ezingadala ukuhlukumezeka kwengane nemiphumela emibi abangayenza.
Konke lokhu ngokombono omuhle, njalo ukubheja empumelelweni yokuhle kunokubi. Shintsha umbono wakho, ubone impilo ngamehlo ehlukile, vula ikhasi bese uthemba inhlanhla.
Ngikufisela inhlanhla ikwazile ukuthumba izinkulungwane zabafundi; kuwebhu, Ama-88% alawa ahlola inoveli kahle. Ukuhlolwa kwayo okungaphezulu kuka-2.400 endaweni yesikhulumi kuvelele Ama-Amazon, ngesilinganiso esingu-4,1 / 5. Ama-45% alaba basebenzisi banikeze incwadi izinkanyezi ezinhlanu futhi bashiya okuvelayo ngemuva kokufunda. Bangu-13% kuphela abalinganise umsebenzi izinkanyezi ezi-3 noma ngaphansi.
Umbhali ithole ukunconywa okuningi ngalesi sitolimende sakamuva, kuzwelonke nakwamanye amazwe. Yize ngalesi sikhathi echitha kancane isitayela sakhe esehlukile, imfihlakalo yakhe ethokozisayo futhi enobuhlakani, kanye nabalingiswa bakhe abanesibindi nezindikimba, kwaheha abalandeli bakhe.
Intatheli nombhali URosa Montero Ungowokuzalwa eMadrid, uzalwe ngoLwesithathu ngoJanuwari 3, 1951, abazali bakhe ngu-Amalia Gayo noPascual Montero. Naphezu kokuphila ebuntwaneni endaweni ethobekile, kwagqama sibonga ubuhlakani bakhe nokucabanga kwakhe. Kusukela esemncane kakhulu wayethanda ukufunda, ubufakazi balokhu yilokho ngeminyaka engu-5 kuphela wabhala imigqa yakhe yokuqala elandisayo.
Ngo 1969, Wangena eComplutense University of Madrid ukuyofundela ukusebenza kwengqondo. Ngemuva konyaka, waqala ukusebenza emaphephandabeni amaningi aseSpain, kufaka phakathi: Uzimele y Pueblo. Lokhu okuhlangenwe nakho komsebenzi kwamenza wayeka ukulandela umsebenzi wakhe wokuba ngudokotela wezengqondo, ngakho-ke washintsha inkambu yakhe futhi eminyakeni emine kamuva uphumelele njengentatheli eMadrid School of Journalism.
Uqale njengomlobi wephephandaba ephephandabeni laseSpain El País, ngemuva nje kwesisekelo sayo, ku 1976. Lapho wenza izindatshana eziningi, ezamvumela ubambe iminyaka emibili (1980 no-1981) isikhundla sokuba ngumhleli oyinhloko kwesengezo sangeSonto sephephandaba.
Kuwo wonke umzila wayo uye ezikhethekile ezingxoxweni, indawo evelele ngokuvela kwayo nesitayela sayo. Kuyamdumisa kubalwa izingxoxo ezingaphezu kuka-2.000 XNUMX ezinamanani avelele, njengo: Julio Cortázar, Indira Gandhi, Richard Nixon, phakathi kwabanye. Kunamanyuvesi amaningi aseSpain nawesiLatin athathe inqubo yakhe ukuyixoxa njengesibonelo.
Umbhali kuqale inoveli IziKronike zokudabuka kwenhliziyo (1979). Lo msebenzi wethuse umphakathi kanye nokugxekwa kwemibhalo ngaleso sikhathi, ngenxa yendikimba yawo mayelana nokuzimela kwabesifazane. Njengamanje kufanele alandise izindaba eziyi-17, izincwadi zezingane ezi-4 nezindaba ezi-2. Kugqamile phakathi kwemibhalo yayo: Indodakazi yamazimu (1997), awina ngawo umklomelo wePrimavera wenoveli yaseSpain.
Amanoveli kaRosa Montero
Umlando wokudabuka kwenhliziyo (1979)
Umsebenzi we-Delta (1981)
Ngizokuphatha njengendlovukazi (1983)
Inkosi ethandekayo (1988)
Muhle futhi umnyama (1993)
Indodakazi yamazimu (1997)
Inhliziyo kaTartar (2001)
Isalukazi salomuzi (2003)
Umlando weNkosi Engabonakali (2005)
Imiyalo yokusindisa umhlaba (2008)
Izinyembezi emvuleni (2011)
Umbono ongenangqondo wokungaphinde ngikubone (2013)
Isisindo senhliziyo (2015)
Ngezikhathi zenzondo (2018)
Ngikufisela inhlanhla (2020)
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » I-Novela » Inhlanhla kaRosa Montero